"Finoana no nandavan’i Mosesy tsy hatao hoe zanaky ny zanakavavin’i Farao, rehefa lehibe izy -nifidy izy mantsy hiara-mitondra fahoriana amin’ny olon’Andriamanitra toy izay hanana fifaliana vetivety amin’ny fahotana, nanao ny fanaratsiana an’i Kristy ho harena be lavitra noho ny zava-tsoan’i Egypta." Hebreo 11:24-26
Fony mbola teo amin’ny ray aman-dreniny i Mosesy, dia nobeaziny araka ny finoan’izy ireo. Mbola tena kely izy dia efa nesorina tamin’ny fianakaviany, mba hiaina ao an-dapan’ny Farao. Ho hadinony ve ireo zavatra naharesy lahatra ny ray aman-dreniny sy ny fampianaran’izy ireo?
Tsy lovaina ny finoana. Na manana ray aman-dreny kristiana aza ny ankizy iray, dia tsy maintsy izy no mibebaka, mitodika amin’ny Tompo, ary manao safidy araka ny finoany. Tsy maintsy handray fanapahan-kevitra iankinan’ny fiainany manontolo izy, ary hanao izany araka ny finoana, izany hoe maniry mafy ny hahatakatra sy hanaraka izay lalana soritan’Andriamanitra ho azy.
Rehefa lehibe i Mosesy dia nanao safidy mazava sy tsy misy marimaritra iraisana, mba homba ny vahoakan’Andriamanitra. Fantany ny zavatra rehetra afoiny: fiainana feno renty, harena ary fahefana tao an-dapan’ny mpanjaka. Nilaozany izany fa naleony nisafidy ny “hiara-mitondra fahoriana amin’ny olon’Andriamanitra” sy ny “fanaratsiana an’i Kristy”. Tamin’ny finoana irery ihany no nahatakarany ny tena hasarobidin’izay nosafidiany, satria raha araka ny fijerin’olombelona, dia goavana mihitsy izany atao hoe mahafoy ny toerana ao an-dapan’ny Farao izany.
Nefa ny finoany no nanazava taminy fa ny “fifaliana ... amin’ny fahotana”, ao an-dapan’ny mpanjaka, dia “vetivety” ihany. Koa tsy nekeny ny ho jamban’ny “zava-tsoan’i Egypta”. Tena sarobidy kokoa taminy ny fiombonana amin’Andriamanitra sy amin’ny olony: “harena be lavitra” ho azy izany.
Ho antsika, inona no lanja omentsika ny fankasitrahan’Andriamanitra, eo amin’ny fiainantsika?